Boost for Olympics - The Standard
HomeSportBoost for Olympics
Boost for Olympics
LOCAL clothing firm Faithwear yesterday announced a $40 million sponsorship package for the Zimbabwe team to take part at the Olympic Games in Greece next month.
ace=”Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif”>Faithwear managing director Brett Van Rooyen yesterday unveiled the sponsorship package in the form of the Zimbabwe Olympic team’s official kit.
“Faithwear is a 100% local company which believes in nurturing Zimbabwean sporting talent. We have faith that our athletes can compete favourably in the international sporting arena and are proud to be associated with Zimbabwe’s best athletes,” Van Rooyen said.
The kit includes both casual and competition gear – such as tracksuits, golf shirts and bags – sporting Zimbabwe national colours.
Zimbabwe Olympic Committee secretary-general Robert Mutsauki appreciated Faithwear’s assistance.